तपाईले पहिले देख्नु भएको सबैभन्दा सहज IKEA फव्वारा डाउनलोड गर्नुहोस् क्रिएटिव अनलाइन
यदि IKEA धेरै चोटि आश्चर्यचकित गर्दछ, यो यसको सिर्जनात्मक क्षमताको कारणले हो पा break्ग्रा तोड्ने र हामीलाई केही फरक पार्न यस पटक यो सोफा सान्स भनेर नि: शुल्क फन्ट थियो जुन तपाईं सजिलै बुझ्न सक्नुहुनेछ किनभने यो अहिलेसम्म सिर्जना गरिएको सबैभन्दा आरामदायक टाइपफेस हो।
फर्निचर जायन्ट IKEA ले सोफा सान्स सुरू गर्यो सबैभन्दा सहज स्रोतको रूपमा र त्यो उही ग्राहकहरू द्वारा प्रेरणा पाइएको छ जसले सोफाहरू सिर्जना गर्न उसको उपकरणसँग खेल्दै थियो। यो ती विचारहरू मध्ये एक हो जुन एक प्रवृत्ति सिर्जना गर्न सक्षम छ र हामी पक्कै अर्को महान ब्रान्डमा देख्दछौं।
यो थियो आधिकारिक IKEA ट्विटर खाता जहाँ नयाँ फव्वारा घोषणा गरिएको थियो र यो IKEA अनलाइन उपकरण भनिन्छ मा आधारित छ भ्यालेन्टुना। यसले तपाईंको आफ्नै सपना सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ ड्र्याग र ड्रिपिंग द्वारा विभिन्न तत्वहरू जुन तपाईंको आफ्नै सिर्जना गर्न यसले बनाउँदछ।
हामीलाई तपाईंको सोफा योजनाकार रचनाहरू मनपराए कि उनीहरूले कहिल्यै पनि Comfiest फन्टलाई प्रेरणा दिए। SOFFA SANS भेट्नुहोस्। यहाँ डाउनलोड गर्नुहोस् https://t.co/ZdMyFuahqM pic.twitter.com/IIHnDHWWFO
- IKEA युके (@ IKEAUK) जुन 28, 2019
यो विचार केवल तथ्यबाट आएको हो त्यो अनलाइन उपकरण सन्देश लेख्न प्रयोग गरिएको थियो, त्यसैले IKEA का केही रचनात्मक दिमागहरू यसलाई रंग र आकारको दायरामा नि: शुल्क डाउनलोडयोग्य टाइपफेसमा बदल्नको साथ आए। IKEA वेबसाइट बाट.
राम्रो, हो? र यो सबै आउँछ होश खुला राख्नुहोस् जब तपाइँका ग्राहकहरूले उपकरणहरू प्रयोग गर्नुहोस् जुन तपाइँ तिनीहरूको विस्थापनमा राख्नुहुन्छ। त्यहाँ कुनै राम्रो प्रतिक्रिया र राम्रो घटनाहरू छन जुन ती ग्राहकहरू बाहिर आउन सक्दछन् जसले ती उपकरणहरू अनौंठा सम्भावित तरिकाहरूमा प्रयोग गर्नेछन्।
यो पनि सक्षम छ प्रभावी संचार र एक धेरै विशेष सम्बन्ध छ त्यो तपाइँको ब्रान्ड अद्वितीय बनाउँछ। हामी पहिले नै जान्दछौं कि ब्रान्ड र ग्राहकहरु बीचको यो सम्बन्धमा वफादारी महत्त्वपूर्ण छ। सन्तुष्ट ग्राहकले तपाईको विज्ञापनमा खर्च गर्न सक्ने सबै हजारौं भन्दा धेरै बेच्ने छ। याद नगर्नुहोस् नूहलाई.
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » धेरै » IKEA को फन्ट फन्ट अहिले सम्म सिर्जना गरिएको सब भन्दा आरामदायक टाइपफेस हो